Nhau - Chii chinonzi plastiki medical box
Plastic Medical bhokisi (inonziwo mushonga bhokisi) kana mabhokisi epurasitiki ekurapa, anoshandiswa zvakanyanya muzvipatara nemhuri. Iyo inogona kushandiswa kuchengetedza zvinodhaka, zvekushandisa zvekurapa kana kuitakura yekuona varwere.
Bhokisi rekurapa, sekureva kwaro zita, mudziyo wekuchengetera mishonga nemidziyo yekurapa, inogona kutorwa ikashandiswa kana paitika mamiriro ezvinhu. Inofananidzwa nekitsi yekurapa, iro rezvekurapa bhokisi rine rakakura vhoriyamu uye hombe chinzvimbo, icho chinogona kuchengeta zvimwe zvinhu. Makiti ekurapa anogona chete kuchengeta zvinhu zvekukurumidzira zvekushandisa kamwe-nguva. Mabhokisi ekurapa akasiyana nekuti anochengeta zvimwe zvinhu nekuda kwehukuru hwazvo.
Kupatsanura kwemabhokisi epurasitiki ekurapa
1.Family Kuchengetedza bhokisi rekurapa
2.Machiremba anotakura maricho ekurapa
3. Yekutanga-yekubatsira kit
4.Mabhokisi ekuchengetedza zvinodhaka muzvipatara
5.Intelligent mushonga bhokisi
6.Desktop yezvokurapa bhokisi
7.Comprehensive inoshandisa yekurapa bhokisi
8.Automative yezvokurapa bhokisi
Kupatsanura nemaitiro uye chimiro
1.Simple yezvokurapa bhokisi
3.Multidrawer bhokisi rekurapa
4.Kusimbisa mushonga bhokisi
5.Large saizi mushonga wekuchengetedza bhokisi
Mhuri yekurapa bhokisi rekutanga-rubatsiro kit
Vanachiremba vanotakura yemunhu yekurapa kit
Multidrawer & Multichamber yekurapa bhokisi
Bhokisi rezvokurapa rakareruka
Akangwara mishonga bhokisi Bhokisi rekurapa rinoshanda
Desktop yezvokurapa bhokisi
Yakakwana inoshandisa yekurapa bhokisi
Mabhokisi ekuchengetedza zvinodhaka muzvipatara
Ndezvipi zvinhu zvepurasitiki zvinoshandiswa kugadzira zvikamu zvebhokisi rekurapa?
Muzvipatara, dhipatimendi kana imwe mhando yemishonga yekushandisa uye zvishandiso zvinowanzo kuverengerwa mune imwe kana akati wandei akakosha mapakeji
Iyi fomu yeseti yakakwana yemishonga inogadziriswa uye yakakamurwa. Inonzi bhokisi rekurapa.
Kunze kwebhokisi rezvekurapa rinoshandiswa munhandare yehondo kana kupisa kwakanyanya uye kumanikidza kwakanyanya nharaunda, mazhinji emamwe mabhokisi ekurapa akagadzirwa nepurasitiki kuumbwa. Semuenzaniso: bhokisi remushonga wepachipatara, bhokisi remishonga remumba, bhokisi rekutanga rekubatsira uye zvichingodaro.
Iyo epurasitiki zvinhu zvatinowanzoshandisa kugadzira zvekurapa bhokisi zviri PP, ABS, PC.
PP yezvokurapa bhokisi zvimiro: hukuru hukuru, huremu hwakareruka, yakaderera kugadzirwa mutengo muhuwandu hwakawanda, inogona kutakura kuchengetwa kwemishonga dzakasiyana siyana, hunyoro-chiratidzo, anti-muchinjikwa-hwema. Iyo inokodzera imba uye chipatara chekuchengetedza zvinodhaka.
Zvinoenderana nekudiwa kwekushandisa, zvimwe zvikamu zvepurasitiki kana simbi zvinoshandiswa kuenzanisa nePP bhokisi zvikamu zvekusimbisa kana kupa mamwe mabasa kubhokisi.
Sekureva kwevashandisi, nharaunda uye kuchengetwa kwemishonga kana ekurapa zvigadzirwa, iro bhokisi remishonga rine akasiyana masitaera, saizi uye zvemukati zvivakwa.
Ndezvipi zvikamu zvePurasitiki zviri mubhokisi remishonga?
Bhokisi remishonga rinonyanya kuve nemapurasitiki zvikamu zvinonyanya kusanganisira zvinotevera zvikamu zvepurasitiki
3. Yemukati tireyi, dhirowa mabhokisi
Jekiseni Kuumbwa Tekinoroji uye matipi epurasitiki ekurapa bhokisi zvikamu
1. Kazhinji, hukuru hweiyo yakapusa mishonga bhokisi iri diki, uye chimiro chayo chiri nyore. Kavha yepamusoro, bhokisi remuviri uye zvemukati zvikamu zvinowanzo gadzirwa nePP mapurasitiki.
2. Kune ekunze zvikamu zveiyo multifunctional mushonga bhokisi ine yakaoma dhizaini, ABS uye PC zvigadzirwa zvine kugadzikana saizi zvinowanzo shandiswa.
3. Aluminium simbi zvikamu dzimwe nguva zvinowedzerwa kusimbisa mativi nemakona emabhokisi emishonga ayo anowanzo kuda kufambiswa.
4. Kudzika kwebhokisi remishonga kwakakura, uye hapana kusimbiswa kwakaringana mukati mebhokisi. ABS kana PC zvigadzirwa zvinodiwa.
5. Zvishandiso zvinoshandiswa zvinofanirwa kugutsa ROHS kana FDA. Iko kuchengetedzwa uye kushandiswa kwezvinhu zvinofanirwa kusiyaniswa kubva kune zvimwe zvinhu.
6. Jekiseni michina uye yekugadzira nharaunda inofanirwa kuve yakachena uye yakatsiga kuzadzisa zviyero.
Medical kit ine musika wakakura, kugadzirwa kwayo kunofanirwa kutevedzera mamwe maindasitiri zviyero. Mestech kambani inogadzira epurasitiki muforoma uye kugadzirwa kweyakajairwa epurasitiki bhokisi rekurapa.Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko.